Using Microsoft Windows 8 (Window 8 ထည့်သွင်းနည်းမှစ လက်တွေ့သုံးနိုင်ရန် ပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည်) | IT Sharing Network
Using Microsoft Windows 8 (Window 8 ထည့်သွင်းနည်းမှစ လက်တွေ့သုံးနိုင်ရန် ပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Window 8 အသုံးပြုနည်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြထားတဲ့ Using Microsoft Windows 8 (Window 8 ထည့်သွင်းနည်းမှစ လက်တွေ့သုံးနိုင်ရန် ပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည်) စာအုပ်ကောင်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကလေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကတော့ အခန်း (၁) Windows OS ကို လေ့လာခြင်း၊ အခန်း (၂) Windows 8 Installation၊ အခန်း (၃) Windows 8 ကို စတင်အသုံးပြုခြင်း၊ အခန်း (၄) Internet အသုံးနှင့် တွဲဖက်လေ့လာခြင်း၊ အခန်း (၅) Windows နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသုံး၊ အခန်း (၆) Windows နှင့် တွဲသုံးမှုများ၊ အခန်း (၇) Windows နှင့် ထူးခြားအသုံး စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည်.... စမြည်းဖတ်နိုင်ရန် ရှေ့စာမျက်နှာ ၅ မျက်နှာကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်.... လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox , Mediafire, Sharebeast, Zippyshare (၄) နေရာတင်ပေးထားပါတယ် ....
ပုံကြီးကြည့်လိုပါက ပုံကို click ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်....
အခြားလေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Facebook တွင် share ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ ခင်ဗျာ...
ဒီ တစ်လုံးထပ်ရိုက်ထည့်ပေးပါမှ ဒေါင်းလော့လင့်ကို ရောက်ပါမည်ခင်ဗျာ...
Windows တင်နည်းစာအုပ် Windows အသုံးပြုနည်းစာအုပ် အသုံးဝင်မည့် စာအုပ်လေးများ Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Htet Aung Bo said...
ဟိုနေ့က ဆိုင်မှာတွေ့တယ် အသာလေး ပြန်ချခဲ့ရတာ အခုတော့ ရသွားပြီ..
Gs Tech said...
my name is thara(ict). please you call me. Daily5to6pm. 09448019597
ကိုထက်အောင်ဗိုလ်နှင့်အတူ ကျွန်တော် မောင်သရ လည်း ကိုပြည့်ဖြိုးကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အကိုခင်ဗျာ... အကိုတို့ရေးသားပြုစုတဲ့စာအုပ်တွေကို မရောင်းရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပြန်မျှဝေပေးတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ... ကျွန်တော်တို့လို လေ့လာနေသူတွေ ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်စေ နေရာဒေသကြောင့်ဖြစ်စေ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ လက်လှမ်းမှီတဲ့သူတွေ အဆင်ပြေစေလိုတဲ့ စေတနာသက်သက်ပဲ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ... ထို့အတွက်ကြောင့် အကိုအနေနဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါတယ်... ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ တောလုံးလုံးမကျသေးတဲ့ ပြည် လိုနေရာမျိုးမှာတောင် စာအုပ်ဆိုင်တွေ နည်းပါတယ် ရှိတဲ့ဆိုတွေလည်း မတင်ကြပါဘူး ဟိုးအရင်က စာအုပ်အဟောင်းမျိုးတွေပဲ အနည်းအပါးဝယ်လို့ရပါတယ်... အကိုအနေနဲ့ အဲ့လင့်ကိုဖျက်ပေးဆိုရင် ဒေါင်းလော့လင့်ကို ဖျက်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ... အားနာ လေးစားစွာဖြင့်... ပြည့်ဖြိုး (ပြည်)